धर्म सास्कृति |
एजेन्सी । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार केही यस्ता कामहरु हुन्छन् जसलाई महिलाहरुले राति गर्नुहुँदैन । महिलाहरुलाई घरको लक्ष्मीको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । त्यसैले महिलाहरुले रातमा यस्ता कामहरु नगरेकै राम्रो मानिन्छ । –महिलाहरुले रातमा भान्छामा जुठा भाँडाहरु कहिल्यै राख्नुहुँदैन । भान्छामा भएको भाँडा सफा राख्नाले घरमा सदैव लक्ष्मीको बास हुन्छ र धन र सुखसम्पत्ति घरमा आउँछ । […]
एजेन्सी । समुन्द्रशास्त्रमा मानिसको आँखा, कान, ओठ, आदिलाई हेरेर धेरै कुरा पत्ता लगाइन्छ । यसका साथै समुन्द्रशास्त्रमा मानिसको शरीरमा भएको चिन्हको समेत छुट्टै महत्व छ । समुन्द्रशास्त्रमा महिलाहरुमा भएको चिन्हको बारेमा समेत कयौँ कुराहरु बताइएको छ, केहि यसप्रकार छन् । १. समुन्द्रशास्त्र अनुसार जुन महिलाको हात लामो हुन्छ त्यस्ता महिलाहरुलाई भाग्यमानी मानिन्छ । यस्ता महिलाहरुले […]
गोपाल भण्डारी, खास गरी हिन्दूका सोह्र संस्कारमध्ये एक ब्रतवन्ध गर्दा बैदिक मन्त्रका साथ गुरूले जनै पहिराइदिने प्रचलन रहेको छ। हिन्दूहरूले बायाँ काँधबाट छड्के पारी दायाँहातमुनी खोकिलासम्म पहिरिने सेतो सुती धागोबाट बनेको पवित्र धार्मिक डोरीलाई जनै भनिन्छ। निवीती दक्षिणे कर्णे यज्ञोपवीतं कृत्‍वा मूत्रपुरीषे विसृजेत्‌ । ऊर्ध्‍वं नाभर्मेध्‍यातर: पुरुष: परिकीर्तित: ।। यसको अर्थ के हुन्छ भने मानिसको शरीरको नाइटोभन्दा माथिको भाग शुद्ध र तलको भाग अशुद्ध मानिन्छ । मल-मूत्र […]
उप–नी–षद् को अर्थ हुन्छ गुरुको चरण नजीक आसनमा बस्नु । के हो उपनिषद ? उपनिषदहरुलाई श्रुति पनि भनिन्छ किनभने उपनिषदहरुलाई वेदको ज्ञानकाण्ड मानिन्छ । वेदको अन्त मानिएकोले वेदान्त पनि भनिन्छ । जंगलको एकान्तमा शिष्यको जिज्ञासा मेटाउन रचना गरिएका ग्रन्थ भएकोले यिनीहरुलाई आरण्यक पनि भनिन्छ । उपनिषदमा जीवनको सबभन्दा गूढ विषय छलफल गरिएकोले उपनिषदलाई रहस्यविद्या पनि भनिन्छ […]
(१)हिन्दू धर्म • हिन्दू धर्म विश्वको प्राचिन धर्म मानिन्छ । • यस धर्मका संस्थापक कुनै एक व्यक्ति वा संस्था नभई यसको विकासमा लाखौं व्यक्ति वा संस्थाहरुको ठूलो योगदान छ । • हिन्दू धर्मका मुख्य पुस्तकहरु वेद, रामायण, महाभारत, उपनिषद्, पुराण आदि हुन् । • यस धर्मअनुसार ३३ कोटी देवी देवता हुन्छन् भने पनि गणेश, सूर्य, […]
एजेन्सी । घर भनेको सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ मानिन्छ । तर सँधै यस्तो हुँदैन । शास्त्रमा आफ्नै घरपनि विभिन्न कारणले असुरक्षित हुने उल्लेख छ । नीति अनुसार शुभ घर यस्तोलाई मानिन्छ जहाँ मायाँ गर्ने पत्नि, दुःख पर्दा साथ दिने साथी, इमान्दार नोकर हुन्छ । यति कुरा भएको ब्यक्ति संसारमा सुखी हुन्छ । तर यी सबै कुरा […]
एजेन्सी । शास्त्रहरूमा जीवनका सबै जरुरी कामका लागि खास कुराहरू बताइएका छन् । यी कुरालाई ध्यानमा राख्दा स्वास्थ्य लाभका साथसाथै सुख समृद्धि पनि प्राप्त हुन्छ । सुत्नु दैनिक जीवनको महत्वपूर्ण अंग हो । सुत्दाखेरी लापरवाही गरेमा स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्छ । कुन दिशामा शिर अनि कुन दिशामा गोडा पारेर सुत्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान […]
एजेन्सी । एक हजार वर्ष पहिले हिन्दु शब्दको अस्तित्व थिएन । प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेदमा सप्तसिन्धुको उल्लेख धेरै ठाउँमा गरिएको पाइन्छ । सिन्धु अर्थ हुन्छ जलराशि । यसैको आधारमा एक नदीको नाम सिन्धु राखियो जुन हाल कश्मिर र पञ्जाब भएर बहन्छ । भाषाविद्हरूका अनुसार संस्कृत आर्य भाषाको ‘स’ ध्वनि ‘ह’ ध्वनिमा परिणत हुन्छ । यसैबाट हिन्दु […]
काठमाडौं । जनैपूर्णिमाको दिन पुरानो जनै फेरेर नयाँ धारण गर्ने र रक्षा सुत्र बाँध्ने प्रचलन छ तर, २०७४ सालमा भने तपाईंलाई नागपञ्चमीकै दिन यी सब काम गर्नुपर्ने हुन्छ । २०७४ सालको पात्रोमा साउन १३ गते नागपञ्चमी र २३ गते जनैपूर्णिमा उल्लेख छ । जनैपूर्णिमाको भोलिपल्ट अर्थात् साउन २४ गते गाईजात्रा छ । तर २३ गते […]
विवाहगर्दा कुन उमेर र कति वर्षको फरकमा गर्दा राम्रो मानिन्छ ?
एजेन्सी । महिला र पुरुषको विवाहगर्दा कति वर्षको फरकमा गर्दा राम्रो मानिन्छ ? अधिकांश पुरुष आफूभन्दा कम उमेरका लाई विवाह गर्न रुचाउछन् । भविष्यमा त्यही उमेर भिन्नताले यौन जीवनमा प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेतर्फ भने कसैको ध्यान गएको पाइदैंन । चिकित्सकहरु विवाहका लागि बढीमा ५ वर्षसम्मको मात्र ग्याप राम्रो हुने बताउछन् । एकै उमेरमा विवाह गर्दा […]